काठमाडौंका प्रेमी किशोर-किहोरी/ युवा-युवतीहरु पनि लाछि रहेछन्। डेटिङका लागि केही गतिला स्थानको माग सरकार र नगरपालिकासँग गर्न नसक्नेहरु गन्हाउने ढलका किनारमा बसेर माया साटिरहेका भेटिन्छन्। तिमीहरुको नामर्दीपनले गर्दा तिम्लाई नै रोग लाग्ला है....बेलैमा सफा सुन्दर र हरियाली डेटिङ प्लेसको माग गर। हिजो साँझ घर जाँदै गर्दा कान्ति र टिचिङ हस्पिटलको ढल मिसाउने खोइ के नामको खोलाको डिलमा बसेर दुई जोडीहरु माया साट्दै थिए।
रक्सी छोड्छु भन्दै बिहान बिहान पशुपति परिसरमा लगेर गिल म्यारी र भर्जिन (सस्ता खाले रक्सी)चढाउँथे र साँझ रोयल स्टाग र सिग्नेचर (नेपालका शहराँ सबभन्दा चल्तिका रक्सी) आँफू पिउँथे। तर छोड्न सक्थाथिन। मन दरो बनाएको त एकैदिन रक्सी चढाउन र पिउन छोडें...मन दरो बनाए के गर्न सकिदो रैन छ र? जाँड रउसी छोड्न मुन्छेले केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने नि सुनायो एक मित्रले।
सोच्नुस् त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएमा माओवादीबाट कति समर्थन पाउलान्? रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री भएमा देउवा पक्षबाट कति समर्थन पाउलान् ? तपाइहरुले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेबाट धेरै समर्थन नपाउलान् भन्नुहोला तर तिनका लागि माओवादीको समर्थन र पार्टी भित्रका आधाले गरेको समर्थन पनि कामयावी हुन्छ।
त्यसैले प्रचण्ड, सुशील र झलनाथले ६/६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। तीन जना ६/६ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो अवधि भनेको अबको डेढ वर्षको समयावधि भित्र संविधान बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्याएर नयाँ चुनाव गराउनुपर्छ।